Kedu ihe kpatara Websitelọ Ọrụ Weebụsaịtị na 5zọ XNUMX Ga-esi Dịkwuo Ya | Martech Zone
Have nwetụla mgbe ị kwụsịrị na ibe weebụ na-eji nwayọ nwayọ, na ịpị bọtịnụ azụ iji gaa nweta ozi ị na-achọ n'ebe ọzọ? N'ezie, i nwere; onye ọ bụla nwere otu ebe ma ọ bụ ọzọ. Ka emechara, 25% nke anyị ga-ahapụ a na peeji nke ma ọ bụrụ na ọ bụghị kwajuru na sekọnd anọ (na atụmanya na-ebili ka oge na-aga).
Mana nke ahụ abụghị naanị ihe kpatara ọsọ ọsọ weebụsaịtị. Nchịkọta Google gaa na akaụntụ saịtị gị arụmọrụ na ọsọ. Ngwa ngwa ngwa nwere ike imerụ ogo ogo weebụsaịtị gị ọbụlagodi na ọdịnaya gị dị mma.
Na nkenke, otu ngwa ngwa weebụsaịtị gị ga-esi metụta ndị ọbịa ga-ahụ weebụsaịtị gị. Ozugbo ha chọtara weebụsaịtị gị, arụmọrụ saịtị gị na-emetụta ma ha nọrọ ma lelee ọdịnaya gị. Ugbu a, ka anyị lelee ụzọ ị ga - esi melite arụmọrụ weebụsaịtị gị.
1. Jiri Google's PageSpeed ​​Tools
Google si NgwaọrụPeseped bụ ebe dị mma ibido mgbe ọ bịara imeziwanye arụmọrụ saịtị gị.
You nwere ike nyochaa weebụsaịtị gị na PageSpeed ​​iji nweta akara ngosi zuru oke, nke bụ ọnụ ọgụgụ na-egosi etu Google siri chee na saịtị gị na - arụ ọrụ - ọkwa gị dị elu, ngwangwa webụsaịtị gị na - eme.
2. Na-ebuli Akaụntụ Gị Weebụ
Iji faịlị pere mpe na ogo faịlụ pere mpe na-enyere aka. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji mezuo nke a:
Na-ebuli ihe oyiyi gị: Nke mbu, gbaa mbọ hụ na ị na - eji ụdị usoro kacha mma maka onyonyo gị (ịmaatụ, JPG maka foto, PNGs maka aghụghọ). Kọwaa ihe onyonyo gị, na-eji usoro na-enweghị atụ na-ebelata ogo faịlụ gị ma na-enwe ntụkwasị obi anya (ọbụlagodi n'anya mmadụ). Gbalia ka onyonyo onyonyo gi dabara adaba - megharia ihe onyonyo ka ha ghara ibu oke.
3. Cache, Cache, Chebe Ebe nrụọrụ weebụ gị
Caching bụ nnukwu ihe na - eme ka ibe gị gbaa ọsọ ọsọ. E nwere ihe abụọ ị ga-eme ma a bịa n’ihe gbasara ịzụ ahịa.
Nke mbu, nweta ma jiri CDN ma obu network network content. CDN bụ netwọọdụ nke sava na-echekwa mbipụta nke weebụsaịtị gị. Mgbe ahụ, mgbe mmadụ rịọrọ ebe nrụọrụ weebụ gị, a na-enyefe ha site na iji ihe nkesa dịkarịrị nso na ha. Nke a na-ebelata ebe ngwugwu ga-agagharị tupu ị rute onye ọrụ ya.
Nke abụọ, setịpụrụ caching na isi HTTP nke soro faịlụ sitere na sava weebụ gị ka ihe nchọgharị ndị ọrụ wee chekwa ụfọdụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) weebụsaịtị gị. Ọ bụ ezie na nke a anaghị enye aka maka nleta mbụ nke ndị ọrụ, ọ nwere ike ịba uru na nleta ndị na-esote mgbe ha na-achọghị ichere ogologo oge ka weebụsaịtị gị ga-ebu.
4.Jide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị na-eji ekwentị eme ihe
Ndị ọrụ ekwentị na-adịkarị na ntanetị ndị dị nwayọ nwayọ karịa ndị PC na laptọọpụ na-eji. Yabụ na ọ dị oke mkpa na saịtị gị nwere ike ibudata ngwa ngwa n'ọnọdụ ndị na-adịchaghị mma. Ekwesịrị ịwepụta nsụgharị nke saịtị iji chọọ obere bandwidth na ndị ibe ha buru ibu.
5. Họrọ Ezigbo Ihe Nlekọta Weebụ Web
I nwere ike ime ihe niile ziri ezi na okwu nke optimizing gá »‹ website, ma á »bá» if rá »your na gá» ‹Bochum na-eweta na-eme dá» ‹ka a bottleneck, á» ‹nwere ike ka na-ahá» slow rá »slow nwayá» website loading oge.
Jide n'aka na ị họrọla usoro nnabata ga-egbo mkpa gị. Nhọrọ mmefu ego, nhọrọ ọnụ ala nwere ike iyi ihe na-adọrọ adọrọ, mana ha nwere ike ịbịa na njedebe nke nwere ike belata saịtị gị (ọkachasị ma ọ bụrụ na ị hụ ọkwa dị elu nke okporo ụzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na webpages gị nwere nnukwu akụ).
Nakwa, jide n'aka na onye na-elekọta gị bụ onye na-eweta ọrụ ngwa ngwa. Ọ bụghị ụlọ ọrụ niile ka emepụtara, na ụlọ ọrụ ụfọdụ na-enye ndị ahịa ha ngwa ngwa ngwa ngwa, ọbụlagodi mgbe ha jidere ihe ọ bụla. Ọ nwere ike isiri ike ịkọ ndị agha bụ nke, mana nyocha ndị ahịa nwere ike ịba uru n'oge usoro ịzụta.
Ọsọ ọsọ nke weebụsaịtị gị, ma n'ihe metụtara ịnweta na idobe ndị ọbịa, yabụ ị ga-achọ ijide n'aka na ibe gị na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ dabara nke ọma, imelite arụmọrụ weebụsaịtị gị esighi ike, na n'isiokwu a, anyị kpuchie ụfọdụ mmeri ngwa ngwa nke ga - enyere weebụsaịtị gị aka.